Nhau - Chinangwa chekusimudza hari uye basa retiapoti
Chinangwa chekusimudza hari hachisi chekungoita kuti teapot iwedzere kupenya uye yakanaka, asiwo nekuti hari yevhu (kana hari yematombo) pachayo ine hunhu hwekushambadzira mhando yetii. Naizvozvo, teapot inochengetedzwa zvakanaka inogona kunyatsoita "rubatsiro tii".
Kurera hari kwakafanana nekudyara matanda, uye nzira yekusimudza hari nekudzura mbesa dzinogona kushanda kwechinguva, pasina hunhu. Chete nekushivirira uye kugadzirisa pamazuva evhiki, uye zvachose kwete kumhanyisa, iwe unogona kuratidza zvizere kuedza kwako kune teapot yako.
1. Kuchengetwa kwehari itsva Pamberi pehari itsva isati yashandiswa, kumwe kurapa kunofanirwa kuitwa. Izvi zvakafanana nemhemberero huru yekutangisa iyo inofanirwa kuitwa mushure mekuvakwa kwechikepe uye isati yafamba. Kune maviri marudzi enzira nyowani dzekugadzirisa hari dzinozivikanwa zvakanyanya parizvino, imwe ndeyechinyakare, uye imwe yacho iri nyore.
1. Patsika nemagariro, tora poto uigeze musina kana munhuhwi. Zadza hari nemvura, kudzika kwemvura kunogona kudarika masendimita maviri pamusoro peti yese, wozoisa mukapu ichangotengwa. Wobva waipisa zvishoma nezvishoma pamusoro pekupisa kwakadzika. Kana mvura yavira, wedzera chitsama chakakura chemashizha tii akagocha pamoto unopisa uye bika kwemaminitsi matatu.
Wadaro, tora mashizha etii ayo akabikwa, uye ramba uchiabikira pamoto wakaderera kwemaminitsi makumi matatu. Bvisa teapot, uiise panzvimbo yakaoma uye isina munhuwi, uye rega iyo teapot kuoma zvakasikwa mumumvuri.
Nekudaro, vamwe vanhu vanosiya danho rekuisa tii mashizha uye vongobika hari itsva nemvura yakachena. Kana chiri chiri nani pane chiri chakaderera, hachina kutsanangudza zvichienderana nesarudzo yako pachako.
Muchidimbu, chinangwa chikuru chevaviri ndechekuburitsa hupfu muma pores emuviri wehari, kubvisa munhuwi wepanyika, marara uye nhete yakatetepa yewakisi pamusoro pemuviri wehari.
2. Nzira yakapusa Kutanga, zadza hari yevhu nemvura inotonhorera, izadze nemvura inodziya mushure mekudirwa, woizadza nemvura inodzika kechitatu mushure mekudirwa kwemvura inodziya. Ndokunge, nekuwedzera zvishoma nezvishoma tembiricha yemvura, iyo poda iri mu pores yemuviri wehari inopfuudzwa. Panguva imwecheteyo, tora kabhurosi kadiki kemazino. Ive yakanyorova mumvura inopisa kwemaminitsi matatu. Kana bristles rebhurosi remazino ranyorova, isa mushonga wemazino uye bhuroka mukati nekunze kwehari yevhu kamwe.
Mushure mematanho mashoma aya, yepasi, isingafadzi hwema uye huni hwehari itsva inogona kubviswa.
Chekupedzisira sukurudza mukati nekunze kwehari itsva nemvura irikufashaira.
Mushure meiyi "mhemberero yekutanga", iyo hari nyowani inogona kuvhurwa zviri pamutemo. Zvinofadza kuva nehari yakanaka, asi kana iwe usingazive yekuchengetedza iyo hari kana nzira yekugadzirisa isina kukodzera, unenge uine hari yakanaka pasina.
Saka kunyangwe uine hari ine mukurumbira, hari yekare, kana teapot yemazuva ano ine dhizaini yekukunda, unogona chete kuvimba nekuchengetedzwa kwekuchengetera mukati memazuva evhiki kuti poto yako yerudo iite senge "Liangju inosangana naBole" uye inoburitsa hunyoro hwayo.
Iko kuomarara kweteputi inonzwika kunosiyana zvichienderana nekupisa kwetembiricha. Naizvozvo, kurira kwetiyi kunogona zvakare kuganhurwa kuita turbidity kana turbidity.
Iko hakuna humwe hunhu hwekuti kurira kwacho kwakapora kana kuti madhaka kuri nani.
Nekudaro: Zvinoenderana nevazhinji vanoziva, hari ine mutsindo unokodzera kubika tii ine mellow uye hwema hwakanyanya (senge mbichana tii);
Poto ine duller kurira yakakodzera kubikira tii inopisa ine yakanyanya kuvirisa uye yakaderera kuravira.
Nzira yekusiyanisa ruzha rwehari ndeyekugadzika teapot yakati teveve pachanza cheruoko rwako rweruboshwe uye zvishoma kudzidzisa muviri wehari nehumwe index index yako.
Imwe pfungwa inofanirwa kusimbisiswa apa ndeyekuti Yixing ivhu rine zvinhu zvequartz, saka mushure mekugadzira teapot, unogona kuona mwenje wegoridhe kana ukaiisa pasi pechiedza, chinova chinhu chisina ivhu. Zvakare, pasi pehari pfava uye zvakatsetseka, uye siginecha inofanirwa kuve yakashambidzika.
Kazhinji hari inenge iine zvisimbiso zviviri kana kupfuura, kunyanya pazasi, muvharo kana mubato wehari.
Iko kushanda kwehari Pamusoro pehari yakanaka inotaridzika kufadza ziso uye yakanaka, chakanyanya kukosha mhando yemashandisirwo. Mune mamwe mazwi, kushanda kweiyo poto yetii.
Kunwa tii uye kutarisa mapoto hazvisi chete kunakidzwa kwehupenyu, asiwo hunyanzvi hwehupenyu.
Basa rakakosha uye mashandiro etepu kuratidza zvizere iwo ruvara uye hwema hwemashizha eti.
Naizvozvo, kana uchitenga teapot, munhu haafanire kungotarisa pane zvisingawanzo uye zvakakosha, asi zvakare tarisa pane zvazvinoita. Mubvunzo wekuita unogona kukurukurwa kubva kuzvinhu zviviri, imwe mhando yetiyi, uye imwe yacho kukura kwetiyi.
1. Mhando dzematepeti Vamwe vanhu vane hunyanzvi mukuunganidza mhando dzakasiyana dzetii, idzo dzinoonekwa seyekare. Naizvozvo, iyo yakareba iyo zera remuti, inowedzera kukosha; kechipiri, mutengo wetii unobva kuna tenzi ane mukurumbira, uye mutengo unosiyanawo zvakanyanya. Kana uchitenga teapot, angave ari matsva kana echinyakare, unofanira kutanga wayera kugona kwako kwemari usati waita sarudzo. Ma teapots anonyanya kuve akapatsanurwa kuita zvigadzirwa zvevhu uye zvigadzirwa zvevhu, zvese zviri zviviri zvine hunhu hwazvo. Porcelain teapots akakodzera kuratidza kunhuwirira uye anowanzoshandiswa pakubika yakaviriswa tii (mbishi tii), uye zvedongo teapots akakodzera kuratidza kuravira, uye anowanzo shandiswa pakubika inorema yakaviriswa tii (Hot tii).
2. Saizi yetapuro Simba retiapot rakasiyana, iro diki ingori kapu diki, uye ndere kungonwa chete: iro hombe rine makapu madiki, anogona kushandiswa kuti vanhu vakawanda vanwe pamwechete. Naizvozvo, kana uchitenga teapot, ive shuwa yekuona saizi yayo zvinoenderana neyako yekushandisa uye shamwari. Zvikasadaro, teapot idiki kwazvo, kune vashanyi vakawandisa, uye kunonoka kunwa: hazvina hunhu kurapa vaenzi. Pane kudaro, kana iyo tii yakakura kwazvo uye paine vashoma vashanyi, zvichave zvisina hunhu kumanikidza vaenzi.
Kurudzira mashoma pombi dzinopisa nekutengesa kwepamusoro mu2020
Mumakore achangopfuura, nekukosha kwetsika dzechivanhu uye kuwanda kwetsika dzokunwa tii, vanhu vari kuwedzera kutarisisa masitayiti, mhando uye hunyanzvi hwekunwa tii.
Shandisai yakanaka teapot kubika yepamusoro-soro tii, iyo inokodzera vese vanonwa mukanwa-vanonwa. Kugadzira tii nekumwa tii chiitiko chakanakisa icho chinofadza kumeso uye kuzvivaraidza. Ihwo zvakare hunyanzvi hwehupenyu uye kunakidzwa kwehupenyu, izvo zvinokwanisa kuwedzera zvishoma kunaka kune hupenyu hwakabatikana.
Kuraidza tii wega kunogona kuzvinyudza mune yekuzorora uye yakanyarara mhepo;
Kuravira tiyi neshamwari dzevatatu kana vashanu: iwe unogona kutaura nezvazvo pasirese, uye kunyange kukanganwa izvo nhasi manheru uye manheru. Iyi zvakare ndiyo yepamusoro mamiriro e "inotonhorera usiku vashanyi vanouya kune tii sewaini".
"Inodzivirira nharaunda, effcient uye hunyanzvi"
haswon "yakanakisa tekinoroji yekuvandudza mubairo" mune yechisere china Brand Mutambo "
Pakutanga kwebudiriro yevanhu, midziyo yaive chikamu chakakosha chehupenyu hwevanhu. Mushure mezviuru zvemakore, nekufambira mberi kwehupenyu hwevanhu, takaramba tichigadzira midziyo iyi kuva yakanaka, inoshanda uye isina kusimba